Torohevitra 5 hampitomboana ny tahan'ny fiovam-ponao amin'ny dokambarotra | Martech Zone
Na fanombohana na fandraharahana antonony, ny mpandraharaha rehetra dia manantena ny hampiasa paikady ara-barotra nomerika hanitarana ny varotra. Ny marketing nomerika dia misy ny fanatsarana ny milina fikarohana, ny marketing amin'ny media sosialy, ny marketing amin'ny mailaka, sns.
Ny fahazoana mpanjifa mety sy ny fitsidihan'ny mpanjifa ambony indrindra isan'andro dia miankina amin'ny fomba fivarotanao ny vokatrao sy ny fomba fanaovana dokambarotra azy ireo. Ny fampahafantarana ny vokatrao dia mipetraka amin'ny sokajy dokam-barotra amin'ny media sosialy. Manao hetsika isan-karazany ianao toy ny fandefasana sary sy lahatsoratra, fampiakarana horonan-tsary, ary fampidirana votoaty mamorona mba handrisika ny fidiran'ny mpihaino.
Amin'ireo paikady rehetra ireo, manana doka video miasa tsara indrindra amin'ny fivarotana ny vokatra ary hahatratra ny mpihaino ambony indrindra. Noho izany, ny marketing video dia fitaovana an-tserasera mahery vaika mivarotra serivisy sy manangana ny marikao.
Tamin'ny taona 2021, tombanana ho 55.34 lavitrisa dolara amerikana ny fandaniana dokam-barotra amin'ny horonan-tsary nomerika any Etazonia ary ny loharanom-baovao dia nanantena fa hiakatra ho 78.5 lavitrisa ny fandaniana amin'ny faran'ny taona 2023. miliara dolara amin'ny vanim-potoana mitovy.
Ary koa, mba hampientanentana kokoa ny paikadin'ny dokam-barotrao, mampiasa vola amin'ny animation video. Ny horonan-tsary mihetsika dia manintona ny sain'ireo mpampiasa ny fahatsinjovana hiova finoana. Mety ho sarotra ny fanaovana horonan-tsary manintona ka mety te hampiasa serivisy famokarana horonan-tsary sy animation ianao hanampy.
Inona no atao hoe doka video?
Ny doka video an-tserasera na dokam-barotra an-dahatsary no haino aman-jery mahomby indrindra amin'izao fotoana izao. Milalao mialoha, mandritra, na aorian'ny fandefasana votoaty ny votoaty fampiroboroboana amin'ny sehatra media sosialy. Ny sasany amin'ireo matihanina amin'ny marketing amin'ny haino aman-jery dia manitatra ihany koa ny famaritana dokam-barotra amin'ny horonan-tsary mba hampidirana doka aseho miaraka amin'ny atiny video, toy ireo izay manomboka milalao ny horonan-tsary rehefa misy olona mametraka cursor ny totozy eo amboniny sy ny doka vidéo teratany nasondrotra tao amin'ny tambajotra doka nomerika.
Ity misy ohatra amin'ny doka video fohy novokarinay:
Tsy isalasalana fa ny dokam-barotra amin'ny horonan-tsary dia iray amin'ireo fomba malaza indrindra hampitomboana ny orinasanao sy hanatrarana ny mpihaino amin'ny Internet. Manantena ny manam-pahaizana ary mino fa ny doka video no hanjaka amin'ny folo taona manaraka, manoro hevitra fa izao no fotoana mety indrindra ho an'ny matihanina amin'ny varotra mba hanitarana ny fahalalany amin'ity sehatra ity. Ary koa, tokony hanadihady ny fomba hanatsarana ny fahatongavany sy ny fahombiazany amin'ny ankapobeny amin'ny fanentanana samihafa izy ireo.
Avy amin'ny fampidirana lohateny mahasarika mankany amin'ny fametahana sary matanjaka, ireto misy toro-hevitra 5 tsara indrindra momba ny doka video izay hampitombo ny tahan'ny fiovam-ponao amin'ny alàlan'ny marketing video.
Soso-kevitra arahina rehefa manampy doka video
Ho an'ny varotra video mahomby sy ny tahan'ny fiovam-po ambony, ireto misy toro-hevitra sy fika sasany amin'ny dingana famoronana hodinihina. Ny dokao dia tsy maintsy manasongadina ny olana azon'ny orinasanao na ny marikao, mampiasa script tsara ho an'ny drafitra video, ary misafidy ny sehatra mety. Ireto ny toro-hevitra 5 momba ny doka video mitondra fiovam-po.
Ataovy mahaliana ny fiandohan'ny dokanao ary Asongadino ny marikao
Ny fahazoana ny hevitra momba ny doka vidéo dia tsy ampy hitondrana fiovam-po satria zava-dehibe kokoa ny fiandohan'ny horonan-tsarinao. Raha tsy tianao ny mpijery handalo ny doka na manindry azy, dia tsy maintsy mihaino ny fanombohan'ny doka ianao mba hanamarika sy hanisa ny segondra vitsy voalohany.
Mba hanamafisana ny mpihaino anao, manaova ezaka kely ary atombohy amin'ny fanambarana mahasarika ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny famahana olana mahazatra sasany, fametrahana fanontaniana mifandraika, na manampy zavatra mahaliana izay mampisongadina ny marikao.
Ny tompona orinasa rehetra dia maniry ny mpanjifa hahita ny doka amin'ny farany; raha avelany ao anatin'ny elanelam-potoana io, dia kely kokoa ny vintana hiakatra ny varotrao. Noho izany, atombohy amin'ny sary mahafinaritra ny doka videonao, ary ampidiro sary mety sy lahatsoratra mazava.
Ataovy azo antoka fa misongadina ny marika ary afaka mampisondrotra ny fahalianan'ny mpanjifa haingana. Ho an'ity tanjona ity dia tsy maintsy milaza amin'ny mpanjifa ianao hoe nahoana ny marikao no tena tsara sy ny fomba anomezan'ny serivisy tombontsoa. Ny olona dia manantena ny zava-drehetra manomboka amin'ny kalitaon'ny vokatra ka hatramin'ny fanohanan'ny mpanjifa, noho izany dia tsy maintsy manantitrantitra ny antony ny dokao miavaka ny orinasanao ary azo atokisana.
Zava-dehibe amin'ny doka video ny porofo ara-tsosialy
Soso-kevitra iray hafa hifantohana amin'ny fanaovana horonan-tsary dia porofo ara-tsosialy. Singa tsy hita matetika amin'ny dokam-barotra amin'ny media sosialy izy io. Araka ny fantatray fa be dia be ny fifaninanana eo amin'ny tontolon'ny nomerika, noho izany dia mila mandroso sy miohatra amin'ny fitaomana ny mpanjifanao ianao fa manome serivisy kalitao an-tserasera azony itokisana. Na izany aza, tsy mora ny mihazakazaka amin'ny toerana mitovy amin'ny mpifaninana tsy tambo isaina.
Ny tompona orinasa rehetra dia tsy maintsy mampihatra izany Video famokarana paikady hahitana ny marika hahatratra ny ambaratonga ambony. Amin'ity tranga ity, ny fananganana fahatokisana dia tokony ho laharam-pahamehana. Raha tsy misy an'io anton-javatra io dia ho sarotra ny hino izay lazainao amin'ny mpihaino anao.
Mety manana fisalasalana izy ireo, indrindra rehefa fanentanana ambony indrindra ifanaovanao amin'ireo olona mbola tsy nijery ny marikao taloha. Noho izany, mba hampidirana porofo ara-tsosialy amin'ny marketing video, azonao atao ny mampiasa fijoroana vavolombelona, ​​hevitra, marika kintana ary votoaty noforonin'ny mpampiasa.
Ny fijoroana vavolombelona dia manampy amin'ny fanesorana ny teny avy amin'ny vavan'ny mpanjifanao ary avy eo mizara ny fanehoan-kevitra amin'izao tontolo izao. Ny tsikera na ny tamberin'ny mpanjifa dia manoritsoritra ny traikefa manontolo sy ny nahasoa ny mpanjifa ny serivisinao. Ankoatr'izay, ireo fijoroana vavolombelona ireo dia manampy ny mpanjifa vaovao hatoky ny marikao.
Ny fampiasana votoaty noforonin'ny mpampiasa dia manome ny fanantenanao amin'ireo mpanjifa izay mankafy ny vokatrao na ny serivisinao. Izany dia miasa tsara ho an'ny afovoan'ny fampielezan-kevitry ny funnel ary manova ny mety ho mpanjifa eo amin'ny fefy.
Mampiasà tsiambaratelo momba ny indostrian'ny dokam-barotra
Raha vitanao ny hevitra mamorona sy ny fiandohan'ny doka, dia tsara ny misarika ny sain'ny mpampiasa. Ahoana anefa ny momba ny varotra sy ny tahan'ny fiovam-po? Zava-dehibe ny mitondra varotra sy mahazo kitika bebe kokoa nefa tsy mandany ora maromaro.
Mila mandrafitra ny doka ianareo rehetra mba hahazoana varotra ambony indrindra. Misy raikipohy iray izay nianteheran'ny mpanao kopia dokam-barotra nandritra ny taona maro mba hamadihana ny fanantenana ho mpanjifa tsy tapaka. Ny formula dia antsoina hoe Aida, izay mijoro fifantohana, fahalianana, faniriana ary asa. Azonao ampiasaina ity raikipohy ity mba hamoronana ireo sora-baventy ary hahazoana kitiho mandeha ho azy tsy misy fampiasam-bola handoavana ny lohanao amin'ny rindrina.
Rehefa manao famokarana horonan-tsary, na horonan-tsary mahazatra na sarimiaina, dia tsy maintsy misarika ny sain'ny mpijery ianao, mitazona ny fahalianana, manorina fitiavana amin'ny vokatra ary avy eo manosika azy ireo hihetsika. Ireo dingana ireo dia hiantoka fa ny doka dia mijanona ho manan-danja, mahasarika ary mifantoka amin'ny fiovam-po.
Fotoan'ny doka videonao
Ny ankabeazan'ny olona dia mijery ny doka raha hitany fa mampientanentana izy ireo fa mitsambikina aloha loatra raha lava ilay doka. Noho izany, aza avadika ho fanadihadiana ny fandresenao. Ataovy fohy sy mamy ny doka video satria 30 segondra na latsaka ny ankamaroan'ny doka video an-tserasera.
Mandritra ny famokarana horonan-tsary, tadidio ao an-tsainao io halavany tsara indrindra io rehefa mamorona ny script ho an'ny horonan-tsary ianao. Na izany aza, miasa ihany koa ny horonan-tsary lava kokoa, rehefa miresaka momba ny fametrahana marika ianao. Ohatra, raha mitantara traikefa na tantara momba ny marikao izay ahitana solontenan'ny mpanjifa na orinasa ianao, dia mety tsara ny horonan-tsary lava kokoa.
Na izany na tsy izany, ilaina ny manala ny votoaty tsy misy dikany sy tsy ilaina. Andramo koa ny manaparitaka ny hafatrao haingana araka izay azo atao mba hitazonana ny mpijery hijery sy hirotsaka. Ny halavan'ny doka videonao dia tsy maintsy miantoka fa tsy ho hitan'ny mpanjifa ho manjavozavo sy tsy manintona.
Ampio antso ho amin'ny hetsika
Na ny horonan-tsaryo na lahatsoratra manampy antso ho amin'ny asa dia manana anjara toerana lehibe amin'ny filazana amin'ny olona izay tokony hatao. Ny fampiasana antso ho amin'ny hetsika (CTA) dia mahatonga ny olona ho aingam-panahy amin'ny atiny ary manampy azy ireo hanapa-kevitra raha mety ny mividy ilay vokatra.
Ny antso ho amin'ny hetsika dia mety ho fanambarana na teny vitsivitsy izay manampy ny mpampiasa hanao ny manaraka rehefa avy nijery ny doka na namaky ny lahatsoratra feno.
Ambonin'izany, ny tanjon'ny dokam-barotra amin'ny vidéo tsirairay dia ny hamporisika ny mpihaino handray andraikitra. Ny antso ho amin'ny hetsika (CTA) dia azo alaina na ampiana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy sary.
Ny tena tsara dia tsara ny mampiasa ny antso ho amin'ny hetsika amin'ny faran'ny horonan-tsary. Ohatra, mba hampisehoana ny mpanjifanao dia afaka mitsidika ny pejinao na ny tranokalanao izy ireo raha mila antsipiriany bebe kokoa, misoratra anarana amin'ny fihenam-bidy sy tolotra, na mividy ny vokatrao sy ny serivisinao.
Ny dokam-barotra amin'ny horonan-tsary dia lasa fitaovana matanjaka indrindra mitazona ny mpanjifanao mifandray amin'ny marikao. Miaraka amin'izany dia ilaina ny fanaovana horonan-tsary mamorona, fohy ary mahasarika. Tsy hitan'ny olona ny zavatra rehetra apetrakao amin'ny sehatra media sosialy, sivaniny ny votoaty mahasarika indrindra, ary raha ny doka no resahina dia aleony ny tena mahaliana. Ny marketing video mahomby dia mitazona anao hahazo mpanjifa, mampitombo ny varotra ary ny fanekena marika. Noho izany, ny dokam-barotra video dia tsy maintsy atao rehefa avy nandinika ny torohevitra noresahina tao amin'ny lahatsoratra.
Tags: fahazoanatahan'ny fiovam-po dokaindostrian'ny dokam-barotrananampymarikany fihenan'ny fiovamfiovam-ponyhampitombo ny fiovam-po dokahalavan'ny videoafovoan'ny fantsonafihetsiketsehana balafomangaporofo ara-tsosialyfijoroana vavolombelonaugcny votoatin'ny mpampiasadoka videodokam-barotra amin'ny horonan-tsaryVideo famokaranafotoana video